Akụkọ - Ndị na-akpụzi akpụzi na-elekwasị anya na ịchọta ọgbọ ọzọ
Dị ka ọtụtụ ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ ndị ọzọ na-ere ahịa, ndị na-emepụta ihe na-emepụta ihe na China na-ebuputakwa oru ngo iji na-adọta ndị na-eto eto.
Taa, ịkpọ ndị ọrụ ọgbọ ọzọ abụrụla ihe kachasị mkpa maka ndị nrụpụta China. Amaara m na nke a dị ka cliché. (Mgbe m dị afọ, amaara m nke ọma ihe clichés bụ. Nke a gosikwara na m emeela agadi na anaghịzi m eso "ọgbọ ọzọ".) Na ụlọ ọrụ na-akpụzi ndị China, ọ na-esiri ike ịhụ ụmụ okorobịa amụrụ mgbe afọ 95 gasịrị, o dikwa ojoo. Gaa na ụyọkọ ndị na-amụ ebu ma soro nna ukwu ahụ ka ị mụta ọgbakọ akpụ akpụ na ịkpụzi akpụzi. Ọnọdụ a ga-anọgide na-echeta ndị a mụrụ na 1980s.
Dị ka ọgbọ nwere ọtụtụ iri afọ nke ahụmahụ ọrụ jiri nwayọọ nwayọọ lara ezumike nká, ụlọ ọrụ plastik amalitewokwa ịghọ “ochie”. Omume a kachasị dị mkpa na nhazi nke ebu. Ndị na-akpụzi akpụzi chọrọ ngwa ngwa ịchọta ndị ọrụ na-eto eto ma debe ha na ụlọ ọrụ a. A pụrụ ịhụ site na nke a na n'oge a ụkọ nke ndị ọrụ nwere nkà, a ka ga-ewere ha dị ka ndị na-eto eto mgbe ha ruru afọ 40! Ee, afọ iri anọ ugbu a bụ afọ iri abụọ…
Na mgbakwunye, mkpakọrịta ndị ọzọ na-arụ ọrụ na-arụsi ọrụ ike iji kwalite ọgbọ egwuregwu ọzọ.
Tụkwasị na nke a, ngalaba thermoforming nke Chinese Society of Plastics Engineers eguzobewo agụmakwụkwọ ma na-agbasi mbọ ike ịkpọta ọtụtụ ndị na-eto eto ka ha sonyere ndị isi oche ya. Na asọmpi ohuru na Thermoforming Conference na 2018, ụgbọ ala a na-achịkwa redio nke ndị ụmụ akwụkwọ sonyere jiri agba ahụ a na-acha na-acha ọkụ-nke dị mma karịa "mpịakọta usoro imepụta akpaaka ụmụ akwụkwọ" n'oge gara aga.
Na nzukọ nke afọ gara aga, ngalaba na-ahazi usoro ahụ hazikwara mkparịta ụka otu maka ịdọta ndị ọrụ na-eto eto "na-achọ unicorns" -Enwere m olile anya na ndị ọrụ na-eto eto pụtara ìhè ga-adị mfe ịchọta karịa unicorn na akụkọ ifo.
Kpọ ndị ga-esote ndị ọrụ n’ọrụ bụ nsogbu na-adịte aka, ọnụ ọgụgụ enweghị ọrụ nke gbadara agbada taa na China ka njọ. Idozi nsogbu a ga - achọ usoro na - agbanwe agbanwe.